OnionShare: Famindrana rakitra amin'ny tamba-jotra TOR. | Avy amin'ny Linux
OnionShare: Famindrana rakitra amin'ny tamba-jotra TOR.
OnionShare dia fitaovana open source (fampiharana maimaim-poana) izay ahafahanao mizara am-pilaminana sy tsy mitonona anarana fizarana misy habe. Noho izany, safidy tsara sy vahaolana rindrambaiko vaovao ho an'ny olana tsilo toy izany, izany hoe mizara rakitra mivantana avy amin'ny loharano mankany amin'ny mpandray, izany hoe, tsy misy mpanelanelana.
Ireo mahalala sy nampiasa ny OnionShare, dia afaka mahazo antoka fa fampiharana kandidà tena tsara hizara rakitra tsy mitonona anarana sy am-pilaminana, indrindra ho an'ireo olona manana kalitaon'ny Snowden (Spy) na mpikambana amin'ireo sehatra sivana data, toa ny Wikileaks.
1 Inona ny OnionShare?
2 Sintomy sy apetraka
3.1 Ny fanitsiana diso
3.2 Fikirana manokana
3.3 Fitsapana fanamafisana
3.4 Fifanarahana ao amin'ny Tor Browser
Inona ny OnionShare?
OnionShare dia rindrambaiko novolavolain'i Micah Lee, ary navoaka tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana GPLv3. Mamela anao hizara am-pilaminana sy tsy mitonona anarana rakitra amin'ny habe rehetra. Amin'ny alàlan'ny fampandehanana mpizara tranonkala ahafahany miditra amin'ny maha serivisy Tor Onion azy, mety ho vetivety na mangingina amin'ny Internet.
Ho an'izany, OnionShare dia mamorona adiresy tokana izay tsy maintsy zaraina amin'ny mpandray mba hahafahan'izy ireo manokatra azy ao amin'ny Tor Browser mba hisintomana ireo rakitra. Ny tombony tsy manam-paharoa dia tsy mitaky serivisy fizarana rakitra na antoko fahatelo, satria ny mpandefa, ilay mpampiasa loharano, dia mampiantrano ireo rakitra amin'ny solo-sain'izy ireo, fitaovana na sehatra misy azy manokana.
Rehefa mihazakazaka OnionShare, ny mpampiasa dia afaka mampiditra na misintona ary mandatsaka rakitra sy lahatahiry eo amboniny, avy eo tsindrio fotsiny ny "Start Sharing". Io dia hiteraka rohy tranonkala miafina (URL) karazana ".onion" ohatra:
Izay afaka ampiasain'ny mpandray haka ny atiny mifandraika amin'izany. Noho izany, tsy voatery mila mametraka sy mampiasa OnionShare izy ireo, fa amin'ny alàlan'ny «Tor Browser» browser dia azony atao ihany koa ny misintona azy ireo.
El Tranonkala ofisialy OnionShare mampiseho hatrany ny kinova farany azo alaina ho an'ny Windows sy Mac, ary ny fombafomba sy ny rohy mankany amin'ireo fonosana azo sintomina ho an'ny kinova samihafa amin'ny Linux. Ny endritsoratra rehetra sy ny lamin'ny OnionShare dia nosoniavin'ny mpandrindra 'Micah Lee', tamin'ny fampiasana mari-pankasitrahana ho an'ny mpamorona. Izy io koa dia manana tsara sy havaozina Wiki miaraka amin'ny fampahalalana marobe amin'ny fampiasana mahomby sy mahomby.
Fomba sy fomba isan-karazany no azo alaina sy apetraka, izay mora sy tsotra avokoa. Na izany aza, amin'ity lahatsoratra ity dia nifantina ny fomba "git" izahay, izay asehonay etsy ambany fa tanterahina amin'ny rafitra fiasa Xubuntu 18.04.
OnionShare dia manana interface interface tsotra sy azo ampiharina. Araka ny hitantsika amin'ity sary manaraka ity, namboarina hiasa nefa tsy mampiasa Tor Browser Browser. Na izany aza, tsy maintsy marihiko fa tamin'ny andrana natao ho an'ity lahatsoratra ity dia tsy nifandray ho azy izy io, ka niroso hatrany izahay apetraka ary ampifanaraho ny Tor Browser mba hisafidianana ny safidy faharoa nofaritana ho "Andramo ny fametrahana miaraka amin'ny Tor Browser" ao amin'ilay faritra antsoina hoe "Ahoana no tokony hifandraisan'ny OnionShare amin'ny Tor?
Ny fanitsiana diso
Fifanarahana ao amin'ny Tor Browser
Fanamarihana: Azo inoana fa tsy niasa ny fikirakirana default, tsy noho ny programa fa noho ny famerana ny Internet izay mety nisy teo amin'ny toerana (firenena) izay nananganana ny fitsapana.
Raha hizara rakitra na fampirimana, izany hoe mamorona rohy web (URL) izay manondro ny atiny, ireto ny dingana tsotra takiana:
Raha te hisintona na handray fisie na folder amin'ny alàlan'ny rohy web (URL) dia mankanesa fotsiny amin'ilay fizarana "Raiso ireo rakitra" ao amin'ny OnionShare ary araho ireo dingana araka ny aseho etsy ambany:
Fanamarihana: Aza adino fa ny rohy web (URL) dia azo vohana ihany koa avy amin'ny «Tor Browser» Browser.
OnionShare mety tsy ilay fampiharana tonga lafatra na mety, noho ny fahatsorany, saingy manatanteraka ny asany mazava ny fizarana rakitra amin'ny fomba azo antoka sy tsy fantatra anarana, amin'ny fomba mora. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia misy safidy hafa tena tsara, izay miasa ihany koa amin'ny Linux, toy ny Syncthing, RetroShare na Wormhole, ny mahasamihafa ny OnionShare dia ny fampiasana ny tambajotra Tor, izay manome fiarovana sy tsiambaratelo tsara.
Ny fampiasana ny tamba-jotra Tor, angamba mety hampihena ny taham-pamindrana ireo rakitra izany rehefa misintona, saingy manonitra izany ny fifamoivoizana rehetra mankany amin'ny farany voahidy, arovana ary alefa amin'ny alalany.
Ary satria ny fifandraisana dia P2P, manome antoka izany fa tsy misy na kely aza voatahiry na amin'ny serivera ivelany aza. Raha tsy hiteny isika mba tsy hahatonga ny fisie intsony dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra "Ajanony ny fizarana" ary hanjavona tsy misy soritra ny zava-drehetra, na hanidy ny programa sy serivisy mifandraika fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » OnionShare: Famindrana rakitra amin'ny alàlan'ny tambajotra TOR